News-KOSMOS Hoyga Dharka Co., Ltd.
Gargaaraha & Daboolka Duvet
Gogosha fidinta & Gogosha
Barkimo Qurxin & Tuur
Raaxeeyayaasha & Gelinta Duvet
Mowqifka aad taagan tahay: Hoyga>News
KOSMOS-Canton Fair Online 127-aad
JUN15-JUN 24,2020, Sababo la xiriira COVID-19, Waxaan qabanay Bandhig Faneedka Canton-ka tooska ah. Waxaan ku tusinaa macaamiisha qaababkeena ugu dambeeyay internetka. Waxaa jira dad badan oo internetka wax ku daawanaya, waxaanna ku guuleysanay guulo waaweyn. Badeecadeenna cusub sidoo kale macaamiisha si wanaagsan ayey u helaan. Waxaan aaminsanahay inuu faafitaanka cudurku dhaqso u gudbi doono, isla markaana waxaan dhowaan soo bandhigi doonnaa alaabaheena wejiga ah waji ka waji macaamiisheena.
KOSMOS-Canton Carwadii 126-aad
Markay ahayd 126th Canton Fair, KOSMOS waxay horumarisay naqshado badan oo cusub waxayna soo jiidatay dareenka macaamiisha badan ee reer Yurub.
Casuumad KOSMOS for 124th Canton Fair
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku casuumo dhamaantiin waxaad u timaadaan oo aan fiiriyo qolkeena kuyaala Carwada 124th Shiinaha ee Soo Dejinta & Dhoofinta ¨C GuangZhou (PAZHOU COMPLEX) Wajiga 3aad, OCT.31 - NOV.4 2018
Martiqaad ku saabsan GO TEX FAIR 2018 - Brazil
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku casuumo intaad timid oo dhan oo aan fiiriyo qolkeena ku yaal GO TEX FAIR 2018 laga bilaabo Sep.11-Sep.13 2018.
Kuxigeenka gudoomiyaha Jiangsu ayaa booqday KOSMOS oo kuyaala Canton Fair
Sanadkii 123-aad Canton Fair, gudoomiye ku xigeenka Gobolka Jiangsu wuxuu u yimid inuu booqdo qolkeenna. Kushiinka, gudoomiye kuxigeenka wuxuu yiri: KOSMOS waa hal shirkad caan ku ah Nantong, naqshadaha iyo badeecadahu aad ayey ufiican yihiin.
Dharka Nalalka Dharkeega Ugu Weyn ee Dharka Soo Saara
Laga soo bilaabo 2008, shirkaddayadu waxay ka qeybqaadaneysay Bandhigga Bandhigga Canton muddo 9 sanadood ah. Waxaan caan ku nahay sida ugu wanaagsan Shiinaha oo ugu wanaagsan alaabooyinka iibiya dharka sariirta ee loo yaqaan 'largestembroidery'. Macaamiisha cusub iyo kuwa hadda jiraba waxay u yimaadeen amarro is-dhaafsi caddaalad kasta.